Heiken Ashi Histogram - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Heiken Ashi Histogram
မေ 14, 2018
ကောင်းစွာညွှန်ပြချက်ကိုသိကိုအသုံးပြုပေမယ့်ဘယ်အချိန်မဆိုဘောင်အပေါ်အများဆုံးရှင်းလင်းပြတ်သားများအတွက် sperate ပြတင်းပေါက်၌နေရာ.
ဒီအညှနျးကိနျးဟာ Heiken Ashi ဖယောင်းတိုင်၏အရောင်နှင့်တစ်ဦး Histogram အပေါ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲမှုနှုန်းပြသ, ပျမ်းမျှပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုမယ့်ရွေ့လျားပျှမ်းမျှနှင့်အတူ. Heiken Ashi အရက်ဆိုင်ရုတ်တရက်အရောင်များကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အသစ်သော bar ဟာရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှအထက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အပြောင်းအလဲကိုခဏဆက်လက်ရန်လုံလောက်ခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်.
အဆိုပါရွေ့လျားပျှမ်းမျှအကွာအဝေး-ခညျြနှောငျစျေးကွက် detect လုပ်ဖို့လည်းအသုံးပြုကြသည်နိုင်ပြီးအကောင်းတစ်ဦးအတွက် add-on ကိုသင့်အောက်ပါလမ်းကြောင်းသစ်သို့မဟုတ်ရေတိုရေရှည်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာမှနိုင်ပါတယ်.
This indicator isaslight variation of Heiken Ashi လှို and depends on the original Heiken Ashi Indicator -attached-.
Heiken Ashi Histogram တစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Heiken Ashi Histogram သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Heiken Ashi Histogram.mq4 install လုပ်နည်း?
Heiken Ashi Histogram.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ Heiken Ashi Histogram.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Heiken Ashi Histogram.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Heiken Ashi Histogram.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Heiken Ashi Histogram.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးHodrick Prescott Indicator